Geeraar | HIGIL
Category Archives: Geeraar
Cali Mire Cawaale / Geeraar
“Maqaloo Oy”: Cali Mire
Posted on Arbaca, Maajo 26, 2010 by Jidhidhico	• Faallo u dhaaf
Maansada “Maqaloo oy” ee uu tiriyey Cali Mire Cawaale sanadkii 1950kii waxa ay daaha-ka-rogaysaa caddaalad-darradii gumaystuhu ku hayey ummada Soomaaliyeed. Sidaas awgeed, sida Abwaankaba dareenkiisa ah, waxa ay maansadanu ka hiyi-kac xooggantahay maansada kale ee uu isla Abwaanku curiyey ee “Soomaaliyey toos,” taas oo ummada ku hagta hilinka midnimada qaran loo’ dhanyahay; oo ah wadiiqo … Sii akhri →
Geeraar / Uncategorized
Posted on Khamiis, Abriil 9, 2009 by Jidhidhico	• Faallo u dhaaf
“Qorraxdii dhacdaba teenu way, kala qaxaysaaye!” Timacadde (AUN) Waa sidaa xaalkeennu, illaa waligiina wuu ahaanayaa, haddaynun dooran inaan sidan isu dhaanno. Waxa layaab leh, in xagaaf (waddo) ay reer Yurub inagu dirqiyeen inoo noqdo marinka ugu habboon een duni ku gaadhi laheen. Waa in ay ina tusaan—fartana inoogu fiiqaan, inaguna dhaliyaan, isla markaasna ina aamin … Sii akhri →